Shariif Xasan oo ka dhoofay Muqdisho kadib markii uu fashil kusoo dhamaaday shirka madasha qaranka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shariif Xasan oo ka dhoofay Muqdisho kadib markii uu fashil kusoo dhamaaday shirka madasha qaranka
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan in maanta uu halkaasi gaaray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, kadib markii uu saakay ka dhoofay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa ka mid ahaa madaxdii ka qeyb gashay shirka madasha wadatashiga qaran ee ka socday xarunta madaxtooyadda ee Villa Soomaaliya, wuxuuna shirkaasi kusoo af-jarmay mid fashil ah.
Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa markii uu ka degay garoonka Baydhabo waxaa halkaasi kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan maamulkiisa, wuxuuna uga warbixiyay natiijadii uu kala soo kulmay shirkii madasha ee Muqdisho, isagoona markii dambe usii gudbay xarunta madaxtooyadda ee maamulka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo.
Dhinaca kale, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maalinta Ciidda kadib waxa uu dib ugu soo laaban doonnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, si uu uga qeyb-galo shirka madasha wadatashiga oo la filaayo in markale uu furmo.
Ugu dambeyntii, madaxda shirka madasha wadatashiga qaran ayaa la filayaa inay dib ugu kulmaan xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, kadib markii shirka urur goboleedka IGAD uu soo gaba-gaboobo.